အိမ်မှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တဲ့ ပျိုမေများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းငါးခု – MyMedia Myanmar
အိမ်မှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တဲ့ ပျိုမေများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းငါးခု
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကြုံတွေ့လာရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုမျိုးစုံကို သက်သာစေတဲ့ အဓိက သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အလုပ်တစ်ဖက်ကြောင့် မိမိရဲ့လူနေမှုကို အာရုံမစိုက်တဲ့ ပျိုမေများအနေနဲ့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်မှီတုန်းလေးဖြစ်တဲ့ ငယ်ရွယ်စဥ်ကတည်းက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်မှသာလျှင် အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်တွေ တသီးတသန့်ပေးပြီးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖြစ်ရင်တောင်မှ တစ်ရက်ကို နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့တင် မထင်မှတ်ထားနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုပြဿနာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားချင်စိတ်ပေါ်လာပြီမို့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ထည့်သွင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာနေရင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေး ငါးမျိုးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်ထားပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပူးထားကာ လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ကပ်ထားပေးပါ။ ပုံမှာပြထားသလိုမျိုး ခုန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ကားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းအထက်မြှောက်ပေးပါ။ ခုန်လိုက်၊ မူလပုံစံပြန်သွားလိုက်နဲ့ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်လောက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းက အကြောအချင်တွေပြေစေကာ ကယ်လိုရီကိုလည်း လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
Plank ထောက်တဲ့ပုံစံမှာနေပြီးတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပုခုံးအကျယ်ထက် နည်းနည်းပိုချဲပေးထားပါ။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို တန်းတန်းဆန့်ထားပါ။ လက်ကိုကွေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အောက်နှိမ့်ချိန်မှာ ရင်ဘတ်နဲ့ကြမ်းပြင်ထိခါနီးအထိ ကပ်လိုက်ပြီး မူလအနေအထားကို ပြန်သွားပါ။
ခေါင်းမော့ရင်ကော့၍ ခါးကိုမတ်မတ်ထားကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ပုခုံးအကျယ်ချဲထားပေးပါ။ ဒူးကွေးလိုက်ချိန်မှာ ကုလားထိုင်မှာထိုင်လိုက်သလိုမျိုး တင်ပါးကို အနောက်သို့ပစ်လိုက်ပါ။ ထိုပုံစံအတိုင်း ထိုင်လိုက်ထလိုက် လုပ်ပေးပြီးတော့ ဒူးကွေးနေမှာ ဘေးဘီဝဲယာမကြည့်ဘဲ ရှေ့တည့်တည့်ကိုပဲကြည့်ပေးပါ။
Source: Love Life. Live Yoga.
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး လက်ဖဝါးမှောက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကပ်ထားပါ။ ဒူးနှစ်ဖက်ကိုတော့ ထောင်ထားပါ။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ရဲ့ အကွာအဝေးက တင်ပါးအကျယ်ရှိရပါမယ်။ ထို့နောက် တင်ပါးကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပေါ်သို့မြှင့်တင်လိုက်ပြီး ထိုပုံစံအတိုင်း ခဏနေပြီးမှ အောက်သို့ပြန်ချပေးပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်ပေးခြင်းက ခါးနာသက်သာစေပါတယ်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး လက်ဖဝါးမှောက်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးကပ်ထားပါ။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ပူးပြီးတော့ ကြမ်းပြင်ကနေ တဖြည်းဖြည်းမြှောက်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နေနိုင်သလောက်ထိ ထိုပုံစံအတိုင်း ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်ထားပေးပြီး မနေနိုင်တော့မှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အောက်သို့ပြန်ချပေးပါ။
MyMedia Myanmar2021-01-25T16:04:10+06:30January 25th, 2021|MYSTYLE MYANMAR|